စီအီးအို Jack Wong ၏အဆိုအရ Meizu X8 သည် Xiaomi Mi 8 SE ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည် Androidsis
Meizu ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Jack Wong က Meizu X8 မည်မျှစွမ်းအားမည်မျှရှိသည်ကိုအလွန်ယုံကြည်မှုရှိသည်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတရုတ်ကုမ္ပဏီ၏ကတ်တလောက်ထဲတွင်ပါ ၀ င်မည့် X8 သည်ကုမ္ပဏီ၏အသိုင်းအဝိုင်းဖိုရမ်မှတဆင့်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည်ဟူသောကောလာဟလများကိုထုတ်ဖော်ပြသရန်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏လာမည့်အလယ်အလတ်တန်းစားစက်ရုံ။။ သူလည်းကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပြသည် X8 ကို Qualcomm ၏ Snapdragon 710 ပရိုဆက်ဆာအသစ်ဖြင့်မကြာသေးမီကဖြန့်ချီခဲ့သည်.
Wong ကလာမယ့် X8 ဟာထက်ပိုပြီးကောင်းလာမယ်လို့ပြောခဲ့တယ် Xiaomi က Mi 8 အရှေ့တောင်, Snapdragon 710 အမှတ်တံဆိပ်မှပထမဆုံးသောစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သူက X8 ပိုကြီးတဲ့မျက်နှာပြင်ရှိလိမ့်မည်ဟုသူကပြောသည်, ဒါပေမယ့်သူကစျေးနှုန်းအတိအကျကိုအတည်ပြုမပေးခဲ့ပါဘူး။ သော်ငြားလည်း, ဒီပစ္စည်းပာာယွမ် ၂၀၀၀ အောက် (ယူရို ၂၅၀ ခန့်) ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။.
Xiaomi Mi 8 SE ကိုပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့်ပြသခဲ့ပြီးတစ်ခုမှာ 64GB သိုလှောင်ရန်နေရာနှင့် 4GB RAM နှင့်နောက်တစ်ခုမှာ 64GB သိုလှောင်မှုအပြင် 6GB RAM ပါရှိသည်။ အဆိုပါမော်ဒယ်များကို ၁,၇၉၉ ယွမ်နှင့် ၁,၉၉၉ ယွမ်အသီးသီးဖြင့်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသည်။ Wong ကထုတ်ဖော်ပြသသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ Meizu X8 သည် Mi 8 SE အတွက်ပွဲကောင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။ နှင့်၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်သည်ဤ Xiaomi ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူခိုင်မာစွာယှဉ်ပြိုင်လိမ့်မည်ဟု။
အဆိုပါ X8 မိုဘိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက အလယ်အလတ်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း၎င်းဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်လက်ဗွေဖတ်စနစ်မပါရှိပါမြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်အတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်ပိုမိုဖော်ထုတ်သော function ကို။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ဒီ Meizu သည် X စီးရီးကိုပြသမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အတိတ်ကကျန်ခဲ့သည့် MX စီးရီးများကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သောဤစီးရီး၏နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ဖြစ်သော X6 ကိုအစားထိုးမည်ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က MX2016 ကိုကြေညာခဲ့သည်။ , ဒါပေမယ့်တရုတ်ကုမ္ပဏီကမဖွင့်ဘူး၊ ဒါကြောင့်မင်းတို့ပြောခဲ့သလိုပဲဒီဖုန်းဟာ MX7 ရဲ့ဆက်ခံမှုဖြစ်လိမ့်မယ် ဤဆောင်ပါး.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Meizu X8 သည် Xiaomi Mi 8 SE ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်မည်ဟု CEO ဖြစ်သူ Jack Wong ကပြောကြားခဲ့သည်
နောက်ဆုံးထွက် Galaxy S9 နှင့် S9 + ၏နောက်ဆုံးသတင်းသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ FM ရေဒီယိုကိုအသုံးပြုနိုင်သည်
Snapdragon Wear 2500: ကလေးများအတွက်စမတ်နာရီများပေါ်တွင် Qualcomm သည်လောင်းသည်